IZiko loPhando lweeMveliso
Ukusukela iimveliso zetsimbi ezikumgangatho ophezulu
Ukuqhubela phambili isitampu sesona sisombululo sisebenza ngokucokisekileyo esinokuqinisekisa zombini imveliso kunye nomgangatho.
Kunokubakho iiseti ezininzi zamalungu estamping adityaniswe ngamalungu ahlukeneyo kwiimilo ezahlukeneyo eziveliswe kwisitampu esiqhubekayo.
Ixesha elide, indlela yokuhlola umgangatho wenxalenye ibe ngumngeni omkhulu, de kube xa sisebenzisa iteknoloji yombono wethu kwaye sifake inkqubo yeCCD kwistampu eqhubekayo.
Inkqubo idibanisa umsebenzi wokukhangela umgangatho oquka ukumila kwenxalenye, ukuhlolwa komlinganiselo, ukujonga inxalenye yenkangeleko.
Kungakhathaliseki ukuba ukhangele iindawo zokulahla ezenziwe ngokufa I-Alu, iZinc, okanye iMg, sinokukunika inkonzo yethu esemgangathweni ophezulu kunye nohlahlo lwabiwo-mali olufanelekileyo.
Kwezinye iindawo zokujula ezifuna umatshini wokucutshungulwa okwesibini njengokugrumba umngxuma, ukucolwa kunye nokucwenga, sinokukunika inkonzo yokumisa enye. Esi sisisombululo semveli sokulahla.
Ukugcina ixabiso lemveliso yokufa, multi-slider die casting ngundosisisombululo esilungileyo. Kwiindawo ezisuka kwi-multi-slider die casting mold, akukho mfuneko yokongeza umsebenzi wokucoca okanye ukupolisha kwindawo ethile.
La manyathelo ma-2 angakusindisa kwiindleko ezinkulu zomsebenzi. Ixesha elipheleleyo lomjikelo wokuphosa lingaba lifutshane nje ngaphantsi kwe-10seconds.
Sisonke sihlala sibonelela ukwenza isixhobo sokusika i-de-gating + umgca wokuzenzekelayo, ngale ndlela unokuseta i-de-gating ngesixhobo sokusika kunye nomgca wokuzenzekelayo phantse ungabi nabasebenzi ukuze ufumane iindawo zokugqibela.
Ukwenziwa kotyalo-mali sisisombululo esihle kwiimveliso zensimbi ezingenasici ezikhupha imveliso, imizekelo yeengxenye ezenziwe kwi-403SS kunye ne-316SS, njl.
Esi sisisombululo esidala sesinyithi esiphuhliswe ukusuka ukugalela isanti. Iyonke inkqubo yemveliso inde kakhulu kwaye icotha.
Ngokuqhelekileyo kuthatha malunga nenyanga enesiqingatha kwibhetshi enye yemveliso. Emva kokwenza imingundo evela kuAlu. okanye ukusuka kwintsimbi, ukungunda kwe-wax kuyafuneka.
Ukungalungi kwesi sisombululo zezi: imveliso ephantsi ngexesha elifutshane, idinga ixesha elide ukuzalisekisa inkqubo epheleleyo; inxalenye yomlinganiselo ingaphantsi kakhulu ekunyamezeleni xa kuthelekiswa nenaliti yeplastiki kunye ne-die-casting kuba ukuza kuthi ga ngoku kukho iinkqubo ezininzi esele zenziwe ngesandla ngabasebenzi abanzima kakhulu abafunekayo; ezinye iimpawu azinakubunjwa kwaye zinokwenziwa kuphela kulungiso lwesibini olufana nokusila, ukugrumba okanye ukupolisha.
Idilesi:Indawo yoshishino yaseHonglaiya, eShatou, kwidolophu yaseChang'an, kwisiXeko saseDongguang, eGuangdong, eTshayina.
© Copyright - 2021 : Onke Amalungelo Agciniwe.